LyT19: Linux & Tapas yadzoka mu2019! | Linux Vakapindwa muropa
LyT19: Linux & Tapas yadzoka mu2019!
LyT (Linux & Tapas) chiitiko chausingakwanise kupotsa. Isu tanga tichitozvizivisa mamwe makore apfuura, asi izvozvi zvinodzosera imwe nShanduro nyowani LyT19. Mumwe mukana wekunakidzwa neLinux neSpanish gastronomy kana iwe wakarasikirwa neshanduro dzakapfuura. Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kushanyira iyo LyT yepamutemo saiti uye kubva kuLxA tinokukurudzira kuti uende, zvirokwazvo hauzodemba kuzviita ...
Vane zvese vakagadzirira LyT19. Iwe unofanirwa kuziva kuti ichave iri muLeón, senguva dzose. Uye chii chichaitika Mugovera, Gumiguru 19 2019. Sezvo iri risingashandisi zuva revanhu vazhinji, iwe hauna chikonzero chekusaenda. Zvakare, kana iwe uchida kutora chikamu uye utaure chimwe chinhu chinonakidza kune avo vanouya, unogona kuzviita. Izwi reKudaidzira Mapepa! yakavhurwa kusvika Gunyana 22.
Mushure mezuva iro, zvirevo hazvichazogamuchirwa. Saka kana uine hurukuro yakanaka mupfungwa, unogona kutumira mazano kune email linuxytapas [pa] gmail, com. Uye zvechokwadi rangarira kuti hurukuro yacho inofanirwa kunge iine hukama nesoftware yemahara, yakavhurwa sosi kana Linux. Kana iri yenguva, inofanira kunge iri pakati pe30 ne45 min. Pane hurukuro dzese dzakagamuchirwa dzinoenderana neizvi, firita ichaitwa uye izvo zvakavharwa zvichaburitswa ...
Kubva kuLxA hatina zvimwe zvakawanda zvekutaura nezvazvo, ingokukurudzira kuti uende, kunga semutauri kana semuteereri. Kunze kwezvo technical ruzivo iwe uchanakirwa zvinwiwa uye tapas kuburikidza nenzvimbo yenhoroondo yeLeón, muBarrio Húmedo. Unogona here kukumbira zvimwe? Zvakanaka unoziva, LyT19 !!!
El chirongwa chakakumirira es:
12:30 - 13:00: musangano muPaza de la Catedral de León
13:00 - 16:30: tapas nepakati penhoroondo
17:00 - 20:00: mharidzo kuSierra Pambley Foundation
21:00: Kudya kwemanheru
24:00: Mutambo wekuonekana
Kunyoresa zviite kubva pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » LyT19: Linux & Tapas yadzoka mu2019!
Bookworm, iyo eBook muverengi iyo bhuku rega rinodya rinofanira kunge rakaiswa
HPLIP inogadziriswazve kutsigira masystem nyowani, panguva ino Debian 10 uye Linux Mint 19.2, pakati pevamwe